Guddiga doorashada Puntland oo maanta soo afmeeraya howsha is diiwaan-gelinta musharixiinta – Radio Daljir
Janaayo 6, 2014 2:24 b 0
Garoowe, January 6, 2014 – ?Gelinka dambe ee maanta waxaa toos loo soo afmeerayaa is diiwaan-gelinta musharixiinta u tartamaya jagada sare ee madaxweynaha iyo ku xigeenka Puntland arbacada soo socota, qabashada araajida ayaa maanta ku beegan.
Musharixiin dhowr ah ayaa is diiwaan-geliyey in kastoo aan si rasmi ah weli loo shaacin, waxaase barbar socda qabashada araajida musharixiin kale oo iyana si toos ah uga tanaasulay inay tartamaan arbacada doorashada dhici doonta.
Guddiga doorashada ayaa hore u shaaciyey in qabashada araajida lagu buuxinayo shuruudaha ay ku egtahay maanta oo isniin ah gelinka dambe, beri ayaa loo dareeri doonaa jeedinta khudbadaha waxqabadka iyo taariikh nololeedka musharixiinta tartamaya.
Goob-joogayaal ka socda Qaramada midoobey ayaa jooga goobta loo qorsheeyey doorashada iyo howlaha xilligan socda iyagoo eegaya sida loo agaasimayo howsha guud.
Magaalada Garoowe waxaa ka socda dhaqdhaaqyo siyaasadeed oo awood badan, waxaa aad loo dareemayaa martida iyo weliba goob-jooyagaasha xilliga doorashada, 8 janaayo oo ah arbacada ayaa la wada sugayaa inay dhacdo doorashada Puntland